खवरट्वीट समाचार प्रभावः भाईरल राम वहादुर राईको भयो उद्धार — KhabarTweet
खवरट्वीट समाचार प्रभावः भाईरल राम वहादुर राईको भयो उद्धार
प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर २०, २०७७ समय: २०:५८:००
दिङ्ला,२० मंसिर- फेसवुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा तस्वीरको माध्यम भएका राम बहादुर राईको उद्धार भएको छ । राईलाई प्रदेश १ सरकारको सक्रियतामा मानव सेवा आश्रम विराटनगरले उद्धार गरेको हो । श्रीष्मा मिडिया प्रालि द्वारा सञ्चालित खवरट्वीट डट कम र रुद्राक्ष अनलाईन टिभीले राईको दयनिय अवस्थाको वारेमा “सामाजिक सञ्जालमा भाईरल बृद्ध भन्छन्: बाँच्न चाहन्छु, मलाई बचाउँनुहोस्” शिर्षकमा मंसिर ११ गते स्थलगत रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थिए ।
आज प्रदेश १ की सामाजिक विकास मन्त्री जसमाया गजमेर र मानव सेवा आश्रमका प्रतिनिधिले विरामी बृद्ध राईलाई घरमै पुगेर उद्धार गरेका हुन् । प्रदेशभरि दयनिय अवस्थामा रहेका ८० परिवारका नागरिकहरुलाई प्रदेश १ ले उद्धार गरि मानव सेवा आश्रममा राखेको राज्यमन्त्री गजमेरले वताईन् । उनले बृद्ध राईलाई पनि मानव सेवा आश्रममा लगेर स्वाथ्य उपचार गरि संरक्षण दिने वताईन् । राईको साथै उनका २३ बर्षीय सुस्त मनस्थितिका छोरा मन कुमार राईकोे पनि उद्धार गरिएको छ ।
२ हप्ता अधि एकजना बृद्धको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाईरल भएको थियो । एउटा थोत्रो व्ल्याकेट ओडेर परालमाथि स्लाईन चढाईरहेको अत्यन्तै नाजुक अवस्थाका बृद्धको सामाजिक सञ्जालमा फोटो सार्वजानिक भएपछि विश्वभर रहेका नेपालीमाझ उनको चर्चा परिचर्चा भएको थियो । उनको दयनिय अवस्था देखेपछि सामाजिक सञ्जालमा स्थानिय देखि केन्द्र सरकारसम्मको चर्को आलोचना भएको थियो ।
को हुन त भाईरल बृद्ध ?
सामाजिक सञ्जालमा कारुणिक तस्विर सार्वजानिक भएपछि भाईरल भएका बृद्ध भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका ३ खार्ताम्छाको चिचिला गैरीगाँउका ७८ बर्षीय राम बहादुर राई हुन । १७ बर्ष अघि श्रीमतीको मृत्यु भएपछि एक सुस्तमनस्थितिका छोरा र एक छोरी सँग वस्दैआएका थिए । केहि बर्ष अघि छोरीलाई मामा नाता पर्नेले पढाईदिन्छु भनेर तराईतिर लगेर सम्पर्क विहिन भएपछि आँफु साहाराविहिन भएको राईले खवरट्वीटसँग गुनासो गरे ।
कसरी भाईरल भयो तस्वीर ?
बृद्ध राम बहादुर राईको तस्वीर कुनै सञ्चार माध्यम वा सामाजिक अभियान्ता वाट शुरुमा भाईरल भएको होईन । स्थानिय खार्ताम्छा स्वास्थ्य चौकीकी एक स्वास्थ्यकर्मी लक्ष्मी राईले स्वास्थ्य उपचारकोलागि बृद्ध वसिरहेको छिमेकी मंगल बहादुर तामाङको दाउरा राख्ने गोठमा पुगेर उपचार गरि फोटो खिचेर फेसवुकमा राखेपछि भाईरल भएको थियो ।
कस्तो छ त उनको अवस्था ?
बृद्ध राम बहादुर राईको अवस्था दयनिय रहेको छ । असोज १८ गते देखि रिंगटा लाग्ने, खोकी, ज्वारो आउने, खाना नरुच्ने समस्या केहि दिन देखि खुट्टा चल्न छोडेको उनले खवरट्वीट सँगको कुराकानीमा वताए । आँफु सँग रहेका एकमात्र सुस्त मनस्थितिका २३ बर्षीय छोरा मन कुमार राईको भर नभएपछि आफ्नो घर छोडेर सहाराको लागि छिमेकी मंगल बहादुर तामाङको घरमा शरणलिन पुगेका हुन् ।
म सँग उपचार गर्न खर्च छैन, बाँच्न चाहन्छु मलाई बचाउँनुहोस् ?
बृद्ध राईले आँफु बाँच्न चाहेको वताएकाछन् । आँफु तन्दुरुस्त भएर सुस्त मनस्थितिको छोरालाई हेरचाह गर्ने उनको चाहना छ । कोहि सहयोगी आएर आँफुलाई सहयोग गर्नको लागि उनले अपिल गरेका थिए । रिंगटा लाग्ने समस्या ठीक भएमा मात्र पनि केहि बर्ष अझै केहि बर्ष बाच्ने उनले उनले हिम्मत गरेकाछन् । छोरा सँगै लगेर उपचार गरिदिए उपचारको लागि जान तयार रहेकोपनि राईले खवरट्वीटलाई वताएका थिए । शनिवार राज्य मन्त्री जसमाया गजमेर उनको झुप्रोमा पुग्दा पनि उनले म सँग स्वास्थ्य उपचारको लागि खर्च छैन कसरी उपचार गर्नु भन्दै गुनासो गरेका थिए । राज्यमन्त्री गजमेरले सम्पूर्ण खर्च हामी गरिदिन्छौं भनेपछि उनको अनुहारमा कान्ति छायो ।
क-कसले गरे त राईलाई सहयोग ?
सामाजिक सञ्जालमा भाईरल भएतापनि बृद्ध राईलाई उल्लेख्य सहयोग भने आउन नसकेको अवस्था रहेको छिमेकीहरु वताउँछन् । उनका मुख्य सहयोगि भनेको छिमेकीहरुनै हुन । उनलाई चिया, खाना, तातो पानी छिमेकी मंगल बहादुर तामाङ र हर्क कुमारी राईले सहयोग गरे । मंसिर विहान शिवम् सप्लायर्स तथा आईएमई सेन्टर दिंलाका सञ्चालक सरिता श्रेष्ठले जन्मदिनको अवसरमा सिरक, डसना, तन्ना र सिरानी प्रदान गरेकी छिन् । राईलाई किरात राई यायोख्खा दिंला शाखा, न्यु समिट बोर्डिङ, व्यापारी रमेश कटवाल,कुमार गुरुङ, बुढाशुव्वा हार्डवेयर, यल्लो रिभर ग्रुपले लत्ताकपडा, चामल, दाल, विस्कुट लगायतका सामाग्री प्रदान गरेका थिए।
षडानन्द नगरपालिकाले पनि सोहि दिन चामल, तेल दाल लगायतका खाद्यान्न र लत्ताकपडा सहयोग गरेको थियो भने वडानम्वर ३ ले बृद्धलाई उपचारको लागि खार्ताम्छा स्वास्थ्य चौकी सँग सहकार्य गरेको थियो । आजनै किरात राई यायोख्खा षडानन्द नगर कमिटिले सिंगापुर, हंगकंग, पोर्चुगल लगायतका प्रवासीहरुवाट संकलन गरेका ४५ हजार ५ सय नगद पनि मानव सेवा आश्रमलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
यस अघि दयनिय अवस्थाका बृद्ध राईलाई श्रीष्मा मिडिया प्रालिले अमेरिकामा रहेका नगेश भट्ट र जापानमा रहेका युगल बोगटी सँगको सहकार्यमा ज्येष्ठमा नै चामल,तेल, नुन लगायतका खाद्य सामाग्री वितरण गरेको थियो । जुन बेला राई आँफै घरवाट झण्डै २ किमि टाढा रहेको वडा कार्यालयमा छोरा सँगै पैदल यात्रा गर्दै पुगेका थिए ।